SingForYou.net - Way Lay Lay, Lwan Lay lay
Way Lay Lay, Lwan Lay lay
Tags : sumaylay02
Joined:Nov 10, 2009
By : thanzinchitthu on May 24, 2010
Score: 165 Rating: 5.00 Comments: 37
Way Lay Lay, Lwan Lay lay's Description
ဒီသီချင်လေးကိုတော့...... မြန်မာပြည်ကိုအလည်အပတ်သွားရောက်နေတဲ့ မမ forevermoe အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ကျွန်တော် "သံစဉ်ချစ်သူ" နဲ့ မမသန့်တို့က အမှတ်တရသီဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ကူညီသီဆိုပေးတဲ့ မမသန့် နှင့်အတူ အမြဲတမ်း လိုလို စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး record လုပ်ပေးတတ်တဲ့ bro 99 ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါကြောင်းးးးး (မမ forevermoe လည်း မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ...)
KiddY-EML on May 26, 2010 0
lar arr pay twar par ei .. *****************
hazel87 on May 26, 2010 0
wowwwww Bravo... like an original... perfect matching duet ... all* for vocalists and bro 99 who recorded it.... cheers!
Zarmaung on May 25, 2010 0
Oww...အရမ်း အရမ်းကောင်းတယ်ဗျို့..ဆိုထားတာ လုံးဝ ရှယ်ဘဲ...၂ ယောက်လုံး ကောင်းတယ်..အားပေး နားဆင်သွားပါတယ်..ရှယ်..:atb.**************For Bro n Sis
panshwe on May 25, 2010 0
This is so lovely :) . LOVE it!! ************************************************* for bro and sis :)
pp01 on May 25, 2010 0
Wow..kg lite kya tar bro than zin yaw..my chit ma ma thant yaw....listen lot ma wa buuu..2 times shi pyii listen tar..GREAT bro 99 lae mix lout tar taw tal..:D*****
romeo on May 25, 2010 0
mite tal mite tal......yay lal kyite tal....nice singing par both of you...and happy BD par ma moe..
mingalarmay on May 25, 2010 0
thant on May 25, 2010 0
Sis Moe atwet amat ta ya lay so khwit ya lo.........bro Thanzin yaw.........9naing yaw........kyay zuu tin par tal........"Happy Birthday MOE".........*******
jpkglay on May 25, 2010 0
အရမ်းကောင်းတဲ့ စုံတွဲသီချင်းလေးဗျာ.. မမသန့်ရော ကိုသံစဉ်ရော.. ဆိုထားတာရေလည်လန်းတယ်ဗျာ... နှစ်ယောက်လုံးကို တကယ်ပဲ ချီးကျူးမိပါတယ်.....
naymin15 on May 25, 2010 0
bro&sis တို့ဆိုထားတာအရမ်းကောင်းတယ်ဗျ..အား ပေးနားဆင်သွားတယ်နော်...တော်တော်ကိုကောင်း တာဗျ...လုံးဝမိုက်တယ်...********:)
paradise on May 25, 2010 0
~မမသန်. အသံနဲ. ဒီသီချင်းလေးဆိုထားတာ ကို အရမ်းကို နားထောင်ချင်ခဲ.မိတာ ခုတော. ဆန္ဒပြည်.၀သွားပြီ :D bro Thanzin ရော မမသန်.ရော ဆိုထား တာ အရမ်းအဆင်ပြေသလို....Mix ထားတာရော Record ထားတာရော က လုံးဝအပိုအလို မရှိ ကွက်တိပဲ.....Happy Birthday Sis Moe :pray >>>>>
songlover015 on May 25, 2010 0
၂ ယောက်လုံး အရမ်းကောင်းတာပဲ ((ဟိုးအပေါ်ကစတားငါးခုကိုကလစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်) :-)
Ilovemusic on May 25, 2010 0
kg lite tae...bD present....kg lite tae..a so taw tway....really so nice2listen par..sis & bro yay...perfect one...5*4both of u par byar.
whitekisslay on May 25, 2010 0
Mama thant&bro thanzin2yaut lone ye vocal nelzayann perfect phit te thichin lay par...:*:*:*:*:*:*:*:*Million stars for2of my bro&sis.....:Happy BD PAR Ma Moe yay":)
dimpleminle on May 25, 2010 0
so twer tar kg mha kg...perfect singing....arr pay nar sin twer par tal shinn...5*****)))))
susannyunn on May 25, 2010 0
ရမ်းကိုကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးပါ :yes :clap :clap :clap >>>> မမသန့်ရဲ့အသံ နဲ့ကော၊ ဘရိုဂျီး မာလကာတီးအသံနဲ့ပါ အရမ်းကို match ဖစ်လှပါတယ်ချင့် ဘရာဗိုဗိုဗို :atb " zhu ni shen re kuai le" ပါမားမို့မို့ရေ >>>>>>>*********************************>>>>>
koaungkhaing on May 25, 2010 0
very very nice duet song... * * * * * * ** * * * * for Mr. Music lover and Ms. Clean
yellownavy on May 25, 2010 0
Ooooooooo... Ma Ma Thant and Ko Thanzin, whatathoughtful present! Very harmonious and lovely singing! Enjoyed it very much... Happy Birthday, Moe yay... 5*
mayangel on May 25, 2010 0
wow ..... don't know what to say .... many many many stars to you two *****************
maung309 on May 24, 2010 0
na yout lone very very nice par.. so tharr tar.. *******************************
sithunaung on May 24, 2010 0
Happy birthday forevermoe !!:)ဆိုထားတာအရမ်းကိုနားထောင်လို့ ကောင်းတယ်ဘရိုသံစဉ်&မသန့် ရေ~~အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်~~*****း)
maureen on May 24, 2010 0
wow...ချစ်မမ နဲ့ ကိုသံစဉ်ချစ်သူတို့ဆိုသွားတာ ကောင်းမှကောင်းပဲ...စုံတွဲသီချင်းလေးတွေနဲ့လိုက်တယ် ...များကြီးဆိုပါဦးလို့ တောင်းဆိုချင်တယ်...မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကလည်း ကောင်းဆိုတော့ ဘာမှကို ပြောစရာမရှိလောက်အောင်ကို ကောင်းနေတယ်... အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်.....********************* for ချစ်မ နဲ့ကိုသံစဉ်ချစ်သူ.......
aungtun1 on May 24, 2010 0
wow,,,,,listen lot ayannn kaung tar pal,,, bro thanzinchitthu and sister thant yay,,,,,,,,,2 york sa lone natdsong lay lal,ayann llite tal,,, bro and sister yay,,,,,,,,,,5********really really love it*********sister forevermoe lal song tay so par ohn,,,,,,,
soramoe on May 24, 2010 0
သီချင်းလေးကို လှပအောင်သွားတဲ့ ko)Thanzin နဲ့ မသန့်တို့ရေ ... မွေးနေ့ရှင် မမိုးတစ်ယောက် မွေးနေ့လက်ဆောင်သီချင်းလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါ တယ် ... nar htaung lo kg lite tar
cha_marry on May 24, 2010 0
good job ama yae..this is so nice to listen i love it..
chitmoe2009 on May 24, 2010 0
wow...so nice duet............**********
gracelad on May 24, 2010 0
thanzinchitthu & mama thant yay arr pay twer par del shint. ayan ko nar taung lok kg par del .naung lel dlo so twel song lay twey myar myar so par ohn nor .
sunandar on May 24, 2010 0
wow! အရမ်းကောင်းတယ်... အရမ်းကြိုက်တယ်.. အသံနဲ့ဆိုဟန်ရော သီချင်းလေးကိုရော.
turikimuriki on May 24, 2010 0
အရမ်းကောင်းပါတယ် … bro & mama thant အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်ရှင် ************
susu23 on May 24, 2010 0
wow ..a yan kg tae BDpresent par pel..bro nae sis thant2yout lone xo thwar kya tarayan kg kya par tel arr pay narr sin thwar par tel shin************4u2......:)))))))Happy BD forever yay.......
mrcastle on May 24, 2010 0
အရမ်းကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးကို လှပအောင်သွားတဲ့ ဘရိုနဲ့ မသန့်တို့ရေ ... မွေးနေ့ရှင် မမိုးတစ်ယောက် မွေးနေ့လက်ဆောင်သီချင်းလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
Thanzinchitthu on May 24, 2010 0
အခုလိုလာရောက်အားပေးနားဆင်သွားတဲ့ bro mrcastle ကို လည်း ကျေးဇူးပါဗျာ...:)))
ayinelay on May 24, 2010 0
နားထောင်ရင်းနဲ့လွမ်းစိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာသလိုပဲ .အရမ်းလိုက်ဖက်ကောင်းမွန်ပါတယ်.. ******** for both!
ဟဟဟ..သီချင်းလေးကလွမ်းဖို့ကောင်းလို့နေမှာပါ bro ရာ.. အားပေးနားဆင်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်...:))
hippo on May 24, 2010 0
great ... ***** for ma ma thant & bro thanzinchitthu ...
အခုလို အရင်ဆုံးလာရောက်အားပေးနားဆင်သွားတဲ့ sis ရေမြင်း မလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...:)
Feedback : 24
Feedback : 63
Subscribe to thanzinchitthu